inguqulelo 0.7.2 – Eyesithathu uyeza
EyoKwindla 1, 2011 ngokuthi umnikelo 11 izimvo
Happy esesibini Java
Siye nje ekhululwe bookmark 0.7.2 kunye ezimbalwa lebug kunye iinguqulelo ezintathu zongezelela kwi Java.
translation Italian Marco Rossi
translation Persian ngokuthi Sushyant Zavarzadeh
translation Spanish ngokuthi angel Torregrosa
kwiminyaka emibini (yaye ngosuku) sele idlule ukususela inguqulelo 0.0.1 wakhululwa kunye nonyaka omnye ukusukela inguqulelo 0.4.3 wakhululwa. Kulo nyaka siye phezu 32,000 Ukopisho xa kuthelekiswa 13,000 kunyaka phambi, kwaye ezineefitsha ngakumbi isuntswana aziintanga kakhulu kwimveliso.
Sasifuna kukubhiyoza kokukhutshwa kweenkonzo onegunya le namhla, kodwa ngelishwa oku kuza kulibaziseka kancinane, nokuba – elizinikeleyo umncedisi 24GB yegusha ekugqibeleni phezulu (ukubamba lo site) yaye kungekudala uya kuba ukulungele ngokuxokozela. Ukukhangela phambili izimvo zakho, iingcebiso, ngamazwi kunye nantoni ungafuna ukuze amgibisele kuthi.
ifayilishwe Phantsi: Imiyalezo Jikelele ephawulweyo Nge: usuku lokuzalwa, engephi, khulula, Java Wordpress
inguqulelo 0.4.3 – Our wordpress plugin anniversary
EyoMdumba 28, 2010 ngokuthi umnikelo 2 izimvo
One year and 13,000 ukulanda emva, we are happy to release version 0.4.3.
This version brings in more compatibility with some themes and better parsing of $ kwaye % symbols.
ifayilishwe Phantsi: izaziso Release ephawulweyo Nge: usuku lokuzalwa, engephi, khulula, Java Wordpress